XOG: Xaaladda Adag Ee Zidane Ku Jiro, Fursadaha Uu Ku Dhisayo Real Madrid Oo Yaraaday & Hal-xidhaale Madax-xanuun Ah Oo Hor Yaalla - Gool24.Net
XOG: Xaaladda Adag Ee Zidane Ku Jiro, Fursadaha Uu Ku Dhisayo Real Madrid Oo Yaraaday & Hal-xidhaale Madax-xanuun Ah Oo Hor Yaalla
Real Madrid ma filayso inay suuqa xagaagan wax dhaqdhaqaaq ah ka samayn doonto, isla markaana ay ciyaartooyo cusub keento marka laga reebo inay dib usoo ceshanayaan laacibiin amaah kaga maqnaa. Tani waxay dhibaato ku tahay Zinedine Zidane oo doonayay inuu kooxdiisa ka xoojiyo dhawr meelood oo ay ka liidato ka hor inta aanu xili ciyaareedka cusub bilaabmin.
Tababaraha reer France waxa uu doonayay inuu suuqa u galo dhawr saxeex oo ay ugu mudan yihiin difaaca midig oo Dani Carvajal uu beddel wanaagsan u raadiyo iyo difaaca dhexe oo Sergio Ramos iyo Varane ay ku kaliyeysteen, isla markaana aanu tayadii laga filayay yeelanin difaaca reer Brazil ee Eder Militao. Waxa kale oo Zidane uu quud-darraynayay inuu lasoo saxeexdo ciyaartoy leh tayooyinka Casemiro oo booskiisa buuxin kara haddii ay wax soo gaadhaan.
Tirada ciyaartoyda Real Madrid ee Zinedine Zidane uu haysto ee hadda tababarka uu u diyaarinayo waa 31 laacib. Afar ka mid ah waxay kasoo laabteen amaah ay xili ciyaareedkii hore ku maqnaayeen, waana Odriozola, Ceballos, Oscar iyo Mayoral, dhamaantoodna ma mustaqbalkooda wali lama go’aamin. Afar ciyaartoy oo kale, waxa la filayaa in la iibiyo ama amaah lagu bixiyo inta uu furan yahay suuqa iibku, waana Bale, James, Mariano iyo Brahim.
Waqtigan, Zidane waxa kale oo sakfiisa uu ku haystaa sagaal weeraryahan oo afar ka mid ah ay weerar dhexe yihiin. Laakiin khadka dhexe, ayaa uu Zidane ciyaartooyo yaraan ka dareemayaa, waxaanu haystaa shan laacib oo kaliya iyo toddoba difaac ah, waana labada meelood ee ay ahayd in laacibiinta ugu badan uu ku haysto.
Ka hor inta aanu xili ciyaareedka dambe bilaabmin, Zidane waxay tahay inuu isbeddel weyn ku sameeyo safkiisa oo uu ka dhigo koox dheellitiran, waxaanay tahay in isaga oo aan suuqa gelin uu haddana baadhbaadho ciyaartoyda uu heli karayo oo uu boosaska wiiqan usoo qaato ciyaartoyda amaahda ah.
Iibintii Achraf Hakimi oo €40 milyan oo Euro ay Inter Milan kula wareegtay, waxay ka dhigan tahay inay lumiyeen difaac aad u wanaagsan oo Carvajal beddeli lahaa, laakiin Odriozola oo amaah ugu maqnaa Bayern Munich oo soo laabtay ayuu Zidane ku dhegi doonaa oo uu ka dhigi doonaa beddelka Carvajal.
Nacho Fernandes oo 30 jir ah ayuu Zidane u isticmaalay beddelka difaaca dhexe ee Ramos iyo Carvajal midkooda maqnaada, sidoo kalena waxa uu ka ciyaarsiiyey labada dhinac ee bidixda iyo midigta xilliyo ay maqnaayeen Carvajal iyo Marcelo, balse difaaca reer France ee Mendy ayaa hadda buuxiyey dhinaca bidix.
Da’da Sergio Ramos oo 34 jir ah, waxa Zidane uu doonayaa inuu helo beddelkiisa, balse Nacho oo buuxin jiray marka uu dhaawac soo gaadho booskiisa ayaa isagana la sheegayaa in la iibin doono, taas oo ah xaalad Zidane ay tahay inuu ka hor tago. In da’yarta uu kasoo dallacsiiyo difaac iyo inuu Nacho ku dhegsanaado, ayaa ah xalalka u bannaan ee uu tababaraha reer France haysto.
Si kastaba, Zinedine Zidane waxa ku yar doorashooyinka, mana haysto fursad uu ku jalleeco meel ka baxsan Santiago Bernabeu maadaama aanay kooxdu diyaar u ahayn inay bixiso lacag uu kusoo iibsado ciyaartooyo cusub.